Football Khabar » ग्रीजम्यान भित्र्याउन बार्सिलोनाले यी स्टार खेलाडी दिँदै !
ग्रीजम्यान भित्र्याउन बार्सिलोनाले यी स्टार खेलाडी दिँदै !
एजेन्सी, असार १३
स्पेनिस बार्सिलोनाले यसै समर सिजनमा फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यान र पूर्वखेलाडी ब्राजिलियन नेइमार भित्र्याउन कसरत गरिरहेको चर्चा छ । यी दुवै खेलाडी अनुबन्धमा बार्सिलोनाले दुवै क्लबसँग खेलाडीसहित केही रकम थपेर डिल गर्न चाहेको छ । विश्वकपविजेता ग्रीजम्यान भित्र्याउन पनि बार्सिलोनाले आफ्ना एक खेलाडी दिएर रकम थप्ने प्रस्ताव गरेको खबर छ । स्पेनिस सञ्चार संस्थाका अनुसार अघिल्लो दिन बार्सिलोना र एथ्लेटिको मड्रिडका अधिकारीबीच ग्रीजम्यानको सरुवाबारे छलफल भएको छ ।
सो छलफलक्रममा बार्सिलोनाले आफ्ना एक खेलाडी दिन अफर गरेको छ । जसमा एथ्लेटिकोले पोर्चुगिज डिफेन्डर नेल्सन समेडोमाथि इच्छा देखाएको छ । यदि बार्सिलोनाले ग्रीजम्यानका लागि उचित मूल्य तिर्न तयार भए एथ्लेटिको सरुवाका लागि राजी हुने बताइएको छ । यता, बार्सिलोना पनि ग्रीजम्यान भित्र्याउन समेडो दिन तयार देखिन्छ ।
तर, खेलाडी लेनदेनमा सहमति देखिए पनि ग्रीजम्यानको सरुवा मूल्यमा भने सजिलै सहमति बन्ने सम्भावना छैन । ग्रीज्यानका लागि एथ्लेटिकोले कम्तीमा १२० मिलियन युरो माग गरेको छ । बार्सिलोनाले सेमेडोलाई सन् २०१७ मा ३० मिलियन युरोमा खरिद गरिएको थियो । यता, फ्रेन्च मिडियाले भने बार्सिलोनाले एथलेटिकोलाई सेमेडोसहित १०० मिलिन युरो दिन तयार भए ग्रीजम्यान बार्सिलोना पुग्ने अधिकतम् सम्भावना रहेको खबर प्रकाशित गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति १३ असार २०७६, शुक्रबार १४:४३
मनकारी रोनाल्डो : जन्मदिनमा क्यान्सरपीडित बालकको उपचार खर्च व्यहोर्ने घोषणा
८ जना खेलाडी घाइते हुँदा बार्सिलोनालाई तनाव : यस्तो हुनेछ सेभिल्लाविरुद्ध प्लेइङ ११
कोपा इटालिया : फाइनल पुग्न आज एटलान्टा र नापोलीको निर्णायक भिडन्त हुँदै
कोपा डेल रे सेमिफाइनल : आज बार्सिलोना र सेभिल्लाको भिडन्त हुँदै
म्यानचेस्टर युनाइटेड एफए कपको क्वार्टरफाइनल प्रवेश
गेटाफेलाई हराउँदै रियल मड्रिड ला लिगाको दोस्रो स्थानमा उक्लियो
इन्टर मिलानलाई हराउँदै युभेन्टस कोपा इटालियाको फाइनलमा
युभेन्टस भर्सेस इन्टर मिलान : पहिलो हाफमा बराबरी
खेलाडी भित्र्याउन ‘पैसाको खोलो बगाउने’ क्लब बन्यो सिटी : कसले कति खर्चिए ?
ला लिगामा रोनाल्डोले बनाएको दुर्लभ रेकर्ड स्वारेजले तोेडे